Sheekada Ronaldinho oo meel XUN gaartay: Haddii aad ogeyd in Akoonkiisa ay ku jirto 5 bound oo qura ku darso in iminkana….!!! – Gool FM
Sheekada Ronaldinho oo meel XUN gaartay: Haddii aad ogeyd in Akoonkiisa ay ku jirto 5 bound oo qura ku darso in iminkana….!!!
(Brazil) 22 Nof 2018. Waxaa horey loo sheegay in Akoonka Ronaldinho ay ku jirto waqtigan 5 bound oo qura waxaana iminka la warinayaa in la weeraray guriga reerkiisa iyadoona lagala baxay Saddex baabuur oo qaali ah.
Saraakiil reer Brazil ah ayaa baryahaanba ku raad joogtay halyeygii hore ee Barcelona iyo waliba walaalkiisa maadaama ay bixin waayeen lacago ganaax ah kaddib markii ay bur-buriyeen dhul keyn ah oo ay dowladdu leedahay iyagoon ogolaansho ka heysan.
Dowladda Brazil ayaa la wareegtay Baasaboorada 38-jirka iyo walaalkiisa kaddib markii ay dacwad oogayaashu isku dayeen inay dib u helaan lacagaha Ganaax uu bixin waayay laacibka balse ay ka war heleen in Akoonkiisa ay ku jirto 5 bound oo qura.
Booliska ayaa iminka weeraray guriga qoyska Ronaldinho si ay ula wareegaan hantidiisa.
Saraakiisha ayaa la wareegay Labo baabuur oo BMW ah iyo Mercedes Benz iyagoo isku dayaya inay helaan lacagaha ganaaxa uu ay la gooyeen Ronaldo iyo walaalkii.
Xeer ilaaliyaha Caddaalada iyo Difaaca deegaanka ayaa kala wareegay saddex baabuur ee qaali ah iyo Sawir Gacmeed qiimo leh Guriga Reerka Ronaldinho ee ku yaala Porto Alegre.
Sababta loola wareegayo hantida laacibka reer Brazil ayaa ah in la damaanad qaado in la bixiyo lacagaha ganaaxa ee dhaawaca ay u geysteen deegaanka aan loo idmin iyagoona ka dhisay hey’ad samafal ah.
Ronaldinho ayaa Walaalkii ayaa lagu helay inay jareen Keymaha iyagoona dhismo ka sameeyay ogolaansho la’aan.
Sida ay sheegeyso Wasaarada Guud ee Brazil in Maxkamadda Cadaalada ee Rio Grande do Sul ay 2013-dii dambi ku heshay Ronaldinho walaalkiisa Assis Moreira iyo hey’adda Ronaldinho Gaucho taa oo caawisa caruurta iyo Dhalinyarada maadaama ay wax yeeleeyeen deegaanka.
Labada dambiile, kuwaa oo sidoo kale la wariyay inay ku socoto Baaritaano Dambi ayaa saxiixay heshiis ah inay bixinayaan lacagaha lagu dayctirayo dhibaatada ay u geysteen Deegaanka balse marna howshaasi ma aysan sii wadin.
Fernando Hierro oo ka warbixiyay sababta uu ugu fashilmay Julen Lopetegui kooxda Real Madrid